မူလစာမျက်နှာ | လွတ်မြောက်ရေးကုထုံး
အခြေအနေ၏တုန့်ပြန်မှုနှင့်အပြုအမူအလွှာများကို ဖြတ်၍ သင်အမှန်တကယ်မည်သူဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။
Alchemical Trinity သည်သင့်အားအမြဲတမ်းရည်ရွယ်ထားသူဖြစ်လာစေရန်သင့်အားကူညီရန်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲထားသောတုန်ခါမှုဆိုင်ရာဆေးကုထုံးအသစ်ဖြစ်သည်။
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူသည် Alchemized vibrational ကုဒ်သုံးမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အပြာရောင် Lotus အဆိုပါဆေးတစ်လက်
ဤကုထုံးသုံးခုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားချည်နှောင်ထားသောအရာများကိုရှင်းလင်းရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်သည်။ ဤကုစားမှုတစ်ခုစီသည်လူမှုရေးအေးစက်မှု၊ ပုံစံများနှင့်အမှတ်တရများကိုကျွန်ုပ်တို့အားမစွမ်းဆောင်နိုင်သောအကန့်အသတ်ရှိသောယုံကြည်မှုများနှင့်အပြုအမူများ၌အပြည့်အဝမဖြည့်ဆည်းခြင်းတွင်ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ has မှပါ ၀ င်သည်။
သီးသန့် UPDATE SUBSCRIBE
အဆိုပါခေတ်သစ်အသက်အရွယ်သည်ရှေး Alchemical နည်းပညာ
လွတ်မြောက်ရေး tools တွေကိုပြုစုပျိုးထောင်လူ့ optimization နှင့်ဝိညာဏ်သစ်တစ်ခုဘုံများအတွက်စံသတ်မှတ်။ alchemical ကုစားတစ်ခုရှေးခေတ်ပေါင်းစပ်တဲ့အစွမ်းထက်နှင့်နက်ရှိုင်းသောသရုပ်ဆောင်သေးနူးညံ့သိမ်မွေ့နိုးထ tool ကိုမှအသက်တာသစ်ဆောင်ခဲ့မကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခေတ်မီနည်းပညာနှင့်အတူရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် amplified ။
karmic ရာထငျစခေဲ့၏သန့်စင်ခြင်းနှင့်ဝင်ပြီးစိတ်ခံစားမှုအပျက်အစီးများမှတဆင့်စိတ်ထဲ, ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အသက်ဝိညာဉ်၏ activation အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုထောကျပံ့ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အတွက်ဟောပြောပွဲသွားလာရသောတစ်ဦးကဆေးတစ်လက်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့သည်စတင်ချိန် မှစ. လွတ်မြောက်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြသောသူဖြစ်နိုင်အောင်ကဤလုံ့လရှိသူရေနုတ်မြောင်းအခမဲ့ဖြစ်လာသူတွေကိုအာဏာကိုတဦးတည်းပြန်ပေးသည်။
ရှေးဟောင်းချက်ပြုတ်နည်းများ, သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ, အနှစ်သာရနှင့်ခေတ်သစ်အသက်အရွယ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ alchemical ရောနှောတစ်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်စစ်ခင်းကျင်းအောက်ပါ။
လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုပြောပါရန်ရှိသည်သောအရာကိုအခြားသူများကိုနားထောင်ကြလော့။ အဆိုပါ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ခံစားမှုနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအဆင့်ဆင့်အပေါ်အသွင်ပြောင်း၏အရည်အသွေးတွေ!
တဦးတည်း၏ဘဝပိုကောင်းအောင်နှင့်ထို့အတွက်အားအသစ်သောလမ်းကိုတစ်ဦးကဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် alchemical နည်းပညာ။ လွတ်မြောက်ရေးယခုအားလုံးမှရရှိနိုင်ဖန်ဆင်းခံ, ရှေးခေတ်ပုံသေနည်းနဲ့အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနည်းပညာကိုအသုံးပြုပါတယ်။
အာရုံ, ပါဝါ & ချိန်ခွင်လျှာ
အာရုံကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲကမှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားပြီးဖြစ်သောဟောင်းပုံစံများအပြေးသုံးစွဲမရတဲ့အခါကျနော်တို့မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ထမ်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ကြသည်။ ဒါဟာလည်းငါတို့အတိတ်အပေါ်နေသောသို့မဟုတ်အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကိုမဖြုန်းပါနဲ့ဆိုလိုသည်။ ကျနော်တို့သို့နှင့်အပန်းဖြေထဲကပိုပြီးမြန်ဆန်ရွှေ့ဒီအရာကခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်လျော့နည်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်စ, ငါတို့သည်လည်းလျော့နည်းအိပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လေ့ပုံစံများထုတ်သန့်စင်သောအခါကျနော်တို့သာမန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်း၏တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်သင်ယူကျနော်တို့မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ၏စိတ်ခံစားမှုပြဇာတ်ထဲမှာချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရ။ လွတ်မြောက်ရေးမြင်စေဖို့အတွက်မျက်နှာပြင်မှကအားလုံးကိုဆောင်ခဲ့ဖွငျ့ဤမခံစားခဲ့ရ, ပြီးတော့တခါအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့အထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုအခါစိတ်ခံစားမှုကိုမဆိုအထူးသဖြင့်လမ်းအတွက်တုံ့ပြန်ရန်အတိတ်ထဲကနေလေ့တာဝန်မရှိဘဲပုံမှန်ပေါ်ထွန်းနိုင်ပြီးကျနော်တို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အလွန်သှေးဆောငျထောင်ချောက်အတွင်းဖမ်းမိဖို့စိတ်သဘောထားမပါဘဲသူတို့နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံသို့မဟုတ်မရပါဘူးဖြစ်စေ။
ကျနော်တို့ထို့နောက်အတွက်ကျသွားမပါဘဲရေထဲကနေကြာပန်းဆွတ်ဖို့ option ကိုရှိသည်။
ကြောင်းအတွင်းစွမ်းအင်သို့ Tune ယခုဘဝ၌သင်တို့၏ဦးတည်ချက်, ရည်ရွယ်ချက်နှင့်မစ်ရှင်အကြောင်းကိုလုံးဝရှင်းပါတယ်။ လွတ်မြောက်ရေး, တဦးတည်းရဲ့အတွင်းစိတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှအဖွင့်ဖွင့်အတွက်တဦးတည်းကို support မိမိတို့၏ပြည်တွင်းရေးသံလိုက်အိမ်မြှောင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်, စည်းစိမ်, လွယ်ကူခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှား၏ခံစားချက်သည်ယခုအချိန်တွင်အတွက်တဦးတည်းလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။
တစ်ဦးကအပြည့်အဝ Spectrum သဘာဝ Alchemical ဖော်မြူလာ
ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောဖော်မြူလာ, ဂရုတစိုက်ပြင်ဆင်, alchemized နှင့် Liberation ဖွဲ့စည်းရန်ဖန်တီး။
သူတို့ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးရုပ်ပျိုနှင့် karmic သန့်စင်စွမ်းရည်တိုက်ဖျက်မည်မှ9ကြိမ်ကိုမီးရှို့ခဲ့ပြီးတစ်ဦးချင်းစီ၏ 100 ကျောက်မျက်ကနေဖန်ဆင်းတော်ရှေးဟောင်း alchemical ရေးဆွဲရေး။
ဖုန်မှုန့်ကိုနောက်ဆုံး4နှစ်ပေါင်းအဆက်မပြတ်ကိုမီးရှို့ခဲ့ကြသော 50 မီးလောင်မှုကနေစုဆောင်း potentized ။ ပဉ်စမမီးနေရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြာအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်သန့်စင်၏နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်၏ရေစက်အာရုံကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
ဖြစ်ရပ်များ၏ကျမ်းပိုဒ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအမှုအရာအဖြစ်ကပိုချောချောမွေ့မွေ့ဆက်ရေးဖို့ခွင့်ပြုအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲအတွက်တစ်ဦးက Durga တုန်ခါမှုအသံကဂါထာ,
အဆိုပါနီးပါး childlike ငယ်အရာရိုးရှင်းသောခံစား, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့လိပ်ပြာစောင့်ကြည့်ကလေးတစ်ဦး၏ခံစားချက်၏စွန့်လွှတ်ထုတ်ပေးပါတယ်။
ပေါင်းစပ်နှင့်မှန်သောချိန်ခွင်သို့သူတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့အတူတကွအပေါငျးတို့သပါဝင်ပစ္စည်းများကိုကြိုးနဲ့တုတ်ကူညီပေးသည်သည့် adaptogenic မှို
ပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ကွန်ရက်မှတဆင့်လွတ်မြောက်မှုကို Spreading ။ ဒီအစွမ်းထက်ဆေးတစ်လက်မှတဆင့်မြေ၏စွမ်းအင်, ရေလမ်းနှင့်လူချိတ်ဆက်ခြင်း။
အဆိုပါ Alchemical သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကုစား
ရွေးနှုတ်စိန် - 10ml
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ Pack ကို
ရွေးနှုတ်ခြင်း - 10ml
အပြာရောင် Lotus - 10ml
လွတ်မြောက်မှု - 10ml
©မူပိုင်ခွင့် 2018 မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီးဖြစ်သော LiberationtheRemedy.com ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိထုတ်ပြန်ချက်များကိုအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုမှအကဲဖြတ်ခြင်းမရှိသေးပါ။ မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမျှဆွေးနွေးခြင်းသို့မဟုတ်ကြော်ငြာခြင်းသည်မည်သည့်ရောဂါကိုမဆိုရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊ ကုသရန်၊ ကုသရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရန်မရည်ရွယ်ပါ။ ထောက်ခံချက်ရလဒ်များပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဖောက်သည်များသည်သူတို့သက်သေခံချက်ကိုတင်ပြပြီးနောက်လက်ဆောင်လက်မှတ်ကိုရကောင်းရနိုင်သည်။ သင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်၊ သူနာပြု၊ ဆေးသောက်လျှင်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိပါကမည်သည့်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်စာမသုံးမီသင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။ ^ AutoShip အစီအစဉ်များအပါအ ၀ င်ဤဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောကမ်းလှမ်းမှုများသည်လေ့ကျင့်သူများသို့မဟုတ်လက်ကားရောင်းသူများအတွက်မဟုတ်ဘဲလက်လီရောင်းချသူများအတွက်သာတရားဝင်သည်။ အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကမ်းလှမ်းမှုသည်အမေရိကန်ဖောက်သည်များအတွက်သာအကျုံးဝင်သည်။